MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaadda Ciidda Carafo ku tukaday Masjidka Shuhadada ee Madaxtooyada Qaranka.
Geesta kale, Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ayaa wuxuu kumannaan dadweyne ah salaadda Ciida kula dukaday Masjidka Isbaheysiga Islaamka ee magaaladda Muqdisho.
Farmaajo ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimiinta ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidda Carafo, isaga oo xujayda sannadkan gudanaya waajibaadka xajka Eebbe uga baryey inuu ka aqbalo acmaashooda suubban.
Amniga magaaladda ayaa aad loo adkeeyay iyadda oo wadooyinka caasimadda lagu arkayo ciidamo isla markaana qaar kamid ah isgoysyadda ay yihiin kuwa xiran.
Madaxweynaha ayaa wuxuu ku tartarsiiyay muwaadiniinta inay is-caawiyaan si farxadda ciiddu ay u wada gaarto dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Mas'uuliyiin kale oo isugu jira wasiiro, Xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa dhankooda dhambaalka dabaaldega u diray Shacabka Soomaaliyeed.
Ummadda Soomaaliyeed ayuu u rajeeyay inay sannadkan sannadkiisa ku gaaraan horumar, barwaaqo iyo isku duubni, isagoona ku boorriyay inay dowrkooda ka qaataan dib u dhiska dalka iyo la dagaallanka cadawga qawleysatada ah ee u taagan dhibaateynta dadka Soomaaliyeed.
Daraasadda ayaa lagu sheegay in shacabka ay dareensan yihiin in wali aan waxba...